Version 0.5.3 – Kartida aad u turjumi URLs
June 1, 2010 by dalabyo 44 Comments
Tani version cusub u ogolaanaya URLs on goobta la turjumay luqado siiyo diirada. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Hans ka Cosmedia (website ku saabsan qalliin la isku qurxiyo iyo daaweynta) u qaatey shaqada sameeyo habkaani, iyo sidoo kale maalgelinta karriin si ay u taageeraan plugin permalinks caadadii. Haddii aad ka maqan feature ah, abuuro tigidh noo goobta horumarinta iyo waxaan u dari doonaa liiska todo naga. Haddii aad rabto in aad na caawiso, maalgelinta horumarinta feature ah waxay naga caawin doontaa u dhici dhaqso, iyo bulshada si ay u helaan wax soo saarka badan oo dhameystiran.
Waxaa sidoo kale jira horumar dheeraad ah ka mid ah, sida xaqiiqada ah in comments sameeyey luqado in ka duwan default ka mid ah waxaa lagu calaamadeeyay sida oo noqday translatable ee afka caadiga ah (aad u baahan tahay si ay u xusaan fursad u turjumo af default in goobaha), taageero fiican Sawirka plugin khasnado super, iyo hagaajinta yar ee version jQueryUI loo isticmaalo in caawisaa WordPress 3.0 taageerada soo socda.
Last item ajendaha ogeysiiskan ah waa in aan rabnaa in aad og nahay inaynu leennahay bog on goobta horumarinta meesha aanu hayno plugins xisbiga liiska waafaqsan saddexaad (goosin haddii loo baahdo). On naga Leaks taageero plugin page furta, sida ay Leaks ah, kaliya abuuro user on goobta iyo si xor ah u edit iyo tan loo hagaajiyo.
Filed Under: Messages General Tagged Iyadoo: deeqo, yaryar, sii daayo, THIS, trac, WordPress 3.0, Conciliation super-kayd